कपाल काट्ने कैंची कसरी पकडने कपाल कतरनी राख्ने उत्तम तरिका - जापान कैंची
कपाल काट्ने कैंची कसरी समात्ने
अक्टोबर 07, 20203मिनेट पढ्ने
हेयरड्रेसिंगको कला होशियारी र जटिल छ - सबै पछि, तपाईं अरू कसैको कपाल तैयार गर्ने र स्टाइल गर्ने काममा हुनुहुन्छ।
वा तपाईं आफ्नै कपाल काटिरहनु भएको छ, जुन सामान्य छ यदि तपाईं यी दिन प्रायः घरमा बस्नुहुन्छ भने।
स्टाइल कतराहरूको राम्रोसँग ह्यान्डल गर्नु कपाललाई कटाई, मास्टरि sc कैंची काट्ने प्रविधिहरूमा पर्याप्त स्तरको शुद्धता प्राप्त गर्न आवश्यक छ।
तपाईं दोहोर्याउने गति चोटहरू जोखिम कम गर्दै हुनुहुन्छ कार्प्टल टनेल सिन्ड्रोम, जुन कुनै बढ्दो नाईको लागि कष्टकर अवरोध हुन सक्छ।
यो लेखमा, तपाई निश्चित रूपमा हेयरड्रेसि sc क्यान्सरहरू कसरी राख्ने भन्ने पत्ता लगाउनुहुनेछ जस्तो सैलुन प्रोफेश्नल।
कसरी काट्ने बेलामा तपाईको कपालको क्यान्सर समात्ने
के तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कसरी कपाल काट्ने कैंचीहरु लाई ठीक संग समात्न? सैलून कपाल काट्ने कैंची होल्डिंग, कपाल काट्ने/बार्बरिंग कैंची वा कतरनी को रूप मा पनि जान्छ, सीधा लाग्न सक्छ; जे होस्, यो देखिन्छ जस्तो सरल छैन।
उनीहरु एउटै तरीकाले उनीहरु भान्छा कैंची को एक जोडी को उपयोग मा कैंची को उपयोग गर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ।
यो नौसिखियाहरु को लागी पेशेवर कपाल काट्ने कैंची बुझ्न को लागी चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ किनकि उनीहरु भान्सा कैंची बाट फरक छन्।
पेशेवर hairdressers कसरी प्रयोग र कपाल काट्ने कैंची काट्ने कैंची ह्यान्डल गर्न सिक्नु पर्छ। जब एक पेशेवर कपाल काट्ने, तपाइँ तपाइँको कतरनी समात्न र कपाल काट्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि भोलि छैन।
हेयरड्रेसि sc कैंची कसरी समात्ने भनेर मास्टरिing तपाईंको हात र कात्रीहरूमा औंलाहरूको प्लेसमेन्टबाट सुरू हुन्छ।
स्टाइलिंग क्यायरहरू तपाईंको औसत कैंचीबाट थोरै फरक हुन्छन्, तीव्र ब्लेडहरू र अधिक नाजुक औंला प्वालहरूको साथ।
यदि तपाइँ तपाइँको स्टाइलिंग कतराहरू हेर्नुहुन्छ भने, तपाइँ सानो औंला प्वालबाट घुमाउरो घुम्न पनि देख्न सक्नुहुन्छ - यसलाई ट्याang्ग भनिन्छ। टाang्गले तपाईलाई काट्ने बखत थप स्थिरता प्रदान गर्दछ।
पश्चिमी पकड भनेको कात्रीहरू समात्ने पारम्परिक तरीका हो किनभने यो हामी सबै नियमित प्रयोग गर्छौं। टाangको साथ औंला प्वाल माथिको छेउमा हुनुपर्दछ।
तपाईं आफ्नो औंठी औंला सानो औंला प्वालमा र तपाईंको थम्बलाई ठूलोमा राख्नुहुन्छ, जबकि तपाईंको गुलाबी ट्याang्गमा टिके हुन्छ (ह्यान्डल हुक)। यस बीच, अनुक्रमणिका र मध्य औंलाहरू माथिल्लो ह्यान्डलको माथि आराम गर्नुपर्दछ; सामान्यतया, कात्रीको साना औंला प्वालको अगाडि ती टिका हुन्छन्।
तपाईंको चारवटा औंलाहरू शीर्ष माथी अझै पनि ब्लेडमा प्रेशर लागू गर्दछन्, यसलाई सन्तुलनमा राख्दै, जबकि तपाईंको औंलाले नाजुक ब्लेडहरू सार्दछ।
पश्चिमी पकड प्रयोग गर्नाले तपाईंको हात स्थिर रहन्छ र तनाव मांसपेशिबाट चोट कम गर्दछ।
पूर्वी ग्रिप सिक्नको लागि यो मूल्यवान हुन सक्छ, जहाँ तपाईं आफ्नो सूचकांक औंला सानो प्वालमा घुसाउनुहुन्छ, अर्कोमा औंला, त्यसपछि गुलाबी मुक्त संग ब्लेड पछाडि मध्य र औंला औंलाहरू विश्राम गर्नुहोस्।
यो निश्चित रूपमा सुरुमा अनौठो हो तर यसले अझ बढी शुद्धता प्रदान गर्दछ र स्लाइरि and र पोइन्ट-कटि like जस्ता प्रविधिहरू खोल्दछ।
कपाल कैंची प्रयोग गर्दा तपाइँको थम्ब सार्दै
हेयरड्रेसि hold कैंची कसरी समात्ने भन्नेमा सामान्य गल्ती भनेको तपाईंको औंला र औंठाको प्रयोग ब्लेडहरू खोल्न र बन्द गर्नको लागि हो। यो उत्तम हुन्छ यदि तपाईंले कपाल काट्ने बेलामा केवल तपाईंको औंठा सारिनुभयो।
यो वास्तवमै अनावश्यक हो - र केही जोखिमपूर्ण - एक भन्दा बढी औंला प्रयोग गर्नका लागि यसले तपाईंको आन्दोलनलाई हल्लाउछ र तपाईंको हातमा टेन्डन थप गर्दछ।
केवल थम्बलाई सार्नाले तपाईंको हातको मांसपेशीहरूले कति काम गर्नुपर्दछ कम गर्दछ - यसैले कार्पल टनेल सिन्ड्रोमको सम्भावना कम हुँदैछ - र तपाईंलाई हेयरड्रेसि machine मेशीनको रूपमा काट्न अनुमति दिन्छ।
तपाईंको कतराहरू र कंघीलाई समात्दै
एकचोटि तपाईंले हेयरड्रेसि sc कैंचीलाई कसरी समात्ने भनेर फ्याँकिए पछि, तपाईं यो जान्न सक्नुहुन्छ कि कसरी कंघी र एकै हातमा आफ्नो कतराहरू सन्तुलनमा राख्नुहोस्।
यो तपाईंको कपालका दिनचर्याबाट केहि अनमोल सेकेन्ड ट्रिम गर्ने (उत्तम उद्देश्य) एक उत्तम तरीका हो। तपाईंले कंघी घुमाउने अभ्यास गर्नुपर्नेछ त्यसैले यो प्राकृतिक र कम्बलको बीचमा साइकल चलाउँदा महसुस हुनेछ।
भाग वा शैली को लागी कंघी प्रयोग गर्दा, आफ्नो हत्केलामा कपालहरू टक। जब यो काट्ने समय हुन्छ, कंघीलाई यसको विश्राम स्थितिमा घुमाउनुहोस्। कंघी तपाईंको अनुक्रमणिका र औंला औंलाहरूमा आराम गर्नुपर्दछ र बीचको औंलाको साथ ठाउँमा रहनु पर्छ।
हेयरड्रेसि hold कैंची समात्न उचित तरिका के हो?
त्यहाँ तपाइँको कैंची ठीक तरिकाले राख्ने धेरै विभिन्न तरिकाहरू छन्, तर पश्चिमी पारम्परिक पकड सबैभन्दा सामान्य हो।
लामो समय अवधिमा कपाल काट्ने क्रममा जोर्नी वा मांसपेशीहरूमा तनावबाट बच्न एर्गोनोमिक प्रयोगको लागि कैंची समात्न उचित तरिका उत्तम हुन्छ।